कसरी गर्ने स्ट्रोङ सेक्स ? जान्नुहोस् यस्ता तरिकाहरु
काठमाडौं । हरेक जोडि बेडमा भएको बेला मानिसहरु सेक्स गर्न आतुर हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा एक अर्कालाई कसरी सुखानुभुती गराउन सकिन्छ त्यसबारे उनीहरुले एकअर्कालाई बुझ्नुपर्छ । युवतीहरुसँग स्ट्रोङ सेक्स गर्न छ भने यी कुराहरु पालन गर्नुपर्छ ।
१. सेक्स अवधि
धेरै मानिसहरुलाई लाग्न सक्छ लामो समयसम्म सेक्स गर्यो भने धेरै मज्जा आउँछ । तर तपाईको यो विचारलाई अमेरिकामा रहेको पेन स्टेट विश्वविद्यालयले गरेको एक अध्ययनमा सेक्स १४ देखि १५ मिनेटसम्म उत्तम हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।
२. कसरी तयार गर्ने ?
सेक्स गरिरहेको बेला जब महिलाहरु आवाज निकाल्ने गर्छन् उनीहरु आफ्नो सेक्स साथीलाई अर्गाजम झन् धेरै बढाउन कोसिस गर्छन् । यसको अर्थ यो हो कि उनीहरु झन् सुमधुर सम्बन्ध बनाउन चाहन्छन् ।
सेक्स गरिसकेपछि नांगै सुत्नु उचित हुन्छ । यदि सेक्स पछि सफा गर्ने काम गरिएन भने त्यसले पछि समस्या ल्याउने अध्ययनले देखाएको छ । यदी तपाईको यौनअंगबाट गनाउने बासनाहरु आएको छ भने तुरुन्त डाक्टरको परामर्श लिनुहोस् ।
मिठो निन्द्रा निदाउन हरेक श्रीमान श्रीमती सेक्स गर्ने गर्छन् । डाक्टरले पनि निन्द्रा लाग्दैन भने सेक्सको साहारा लिन आग्रह गर्छन् । एजेन्सीबाट
युवकको पेटको अप्रेशन गर्दा ९ वटा चम्चा भेटिएपछि ......